ဆောင်းပါး | အစွန်လူဆိုတဲ့ အနက်ကို အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းဖွင့်နေတဲ့ ပါရမီရှင်လေး ထရန့် - Sports Home Time
ဆောင်းပါး | အစွန်လူဆိုတဲ့ အနက်ကို အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းဖွင့်နေတဲ့ ပါရမီရှင်လေး ထရန့်
အီတလီတိုက်စစ်မှူးဟောင်းကြီး Gianluca Vialli က စကားတခွန်းပြောခဲ့တာရှိတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အစွန်လူဆိုတာက အသင်းတစ်သင်းမှာ အညံ့ဆုံးပဲ။ သူက တိုက်စစ်ပိုကောင်းရင် တောင်ပံသမားလို ကစားနိုင်ပြီး ခံစစ်ပိုကောင်းရင်တော့ ဗဟိုခံစစ်သမားလိုလည်း ကစားနိုင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။
တူညီတဲ့ သီအိုရီတစ်ခုကို လီဗာပူးဗဟိုခံစစ်သမား ကာရေဂါကလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်ကစားသမားကမှ အစွန်လူအဖြစ်နဲ့ ကစားပြီး တိုးတက်လာဖို့ ဆန္ဒမရှိပါဘူးတဲ့။ ဒီစကားက ဂယ်ရီနဗီးကို တိုက်ရိုက် ဖဲ့ခဲ့တာက ၅၀% ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မော်ရင်ညိုကလည်း သူကြိုက်ရတဲ့ ညာအစွန်လူ Paulo Ferreira နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဒီလိုပြောဖူးတယ်။ ” သူက ပွဲမှာ ဘယ်တော့မှ အကောင်းဆုံးကစားသမား မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှတ် ၁၀ ပေးရင် အမြဲတမ်း ၇ လောက်ရတတ်တဲ့သူပဲ ” လို့ ဖြစ်တယ်။
ကမ္ဘာဘောလုံးလောကကြီးက အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ အစွန်သမားတွေရဲ့ ကစားဟန်နဲ့ပက်သက်လို့ တော်လှန်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကလည်း စတင်ခဲ့တာ ဆယ်ဆုနှစ် ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ အစွန်သမားနဲ့ ပက်သက်လို့ အချက်သုံးချက်နဲ့ အကဲဖြတ်နေကြဆဲပါပဲ။
၁) သူ့ရဲ့နေရာကို ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ကစားနိုင်သလဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြိုင်ဘက် တောင်ပံသမားထက် ပိုကောင်းသလား
၂) တိုက်စစ်လိုက်မှုတွေမှာ ဖြတ်တင်ဘောကို ဘယ်လောက်ထိ ထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သလဲ
၃) ဒီအလုပ်နှစ်ခုအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘယ်လောက်ထိ အားသန်သလဲ၊ ကွင်းအတွင်းမှာ အတက်အဆင်းကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ပြင်းထန်စွာ လုပ်နိုင်သလား
အစွန်သမားတွေက ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာနဲ့ ဖန်တီးမှုတွေမှာ ပါဝင်ပေးနိုင်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး တွက်ချက်ခံရမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခြားသော နေရာတွေကတော့ ပိုပြီးလေးစားခံရမှုတွေ ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ဂိုးသမားတစ်ဦးကို sweeper-keeper အဖြစ် အသုံးပြုမှုကနေ တိုက်စစ်သမားကို false9အဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းတွေလိုပေါ့။ အားလုံးက နေရာတွေကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ သုံးသပ်မှုနဲ့ လေးစားမှုတွေ ပေးလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အစွန်သမားတစ်ယောက်နဲ့ ပက်သက်လာရင်တော့ ပွဲအပေါ်မှာ အမြင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ? ဘောလုံးကို သက်သောင့်သက်သာ ကစားနိုင်လား? ပေးမှုကောင်းတွေ လုပ်နိုင်လား? ဒီလို ဆယ်ဆုနှစ်ကြာ ကိုင်စွဲထားတဲ့ အမြင်တွေက အများကြီး မတိုးတက်လာသေးပါဘူး။ ဒန်နီအဲဗက်စ်နဲ့ ဖီလစ်လမ်းတို့ဟာ လုပ်အားနှုန်းနဲ့ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာ ကစားနိုင်စွမ်းတွေအတွက် အထူး အသိအမှတ်ပြုခံရတယ်။ သူတို့က ကွင်းလယ်လူတစ်ယောက်လိုတောင် ဘောလုံးကစားနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးကလည်း ကွင်းလယ်သမားတွေနဲ့ တွဲဘက်ပြီး ဖန်တီးရှင်တွေလိုတောင် ကစားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။
အင်္ဂလန်ပြင်လိဂ်မှာ အစွန်လူတွေကို အသုံးချမှုနဲ့ အထင်ကြီးမှုတွေ များစွာ ရှိလာနေပေမယ့် ထရန့် အလက်ဇန္ဒါး အာနိုးနဲ့ ပက်သက်လာရင်တော့ လေးစားခံရမှုက ထိုက်သင့်သလောက် မရသေးပါဘူး။ လီဗာပူးဟာ ဖန်တီးရှင်မရှိတဲ့ အသင်းတစ်သင်းပါ။ ကော်တင်ညိုကို လက်လွတ်ရတဲ့နောက် ယာဂင်ကလော့ပ်ဟာ ဖန်တီးရှင်ဆိုတဲ့ ကစားသမားမျိုးကို ထပ်မလိုချင်တော့ပါဘူး။ ဖာဘင်ညိုဟာ တကယ်တမ်းတော့ တည်ငြိမ်တဲ့ holding player တစ်ဦးပဲဖြစ်တယ်။ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုမှာ သင့်တော်ကောင်းမွန်ပေမယ့်လို့ သူက ပီယာလိုကဲ့သို့ ကစားသမား မဟုတ်ပါဘူး။
ဟန်ဒို၊ ဂီနီ၊ မီလ်နာတို့ကတော့ လုပ်အားကို အားပြုတဲ့ ကွင်းလယ်လူတွေပါ။ ကိတ်တာကတော့ အခြေမကျသေးဘူး။ လယ်လာနာနဲ့ ရှာကွီရီကလည်း ပုံမှန်နေရာမရဘူး။ ဖာမင်နိုကတော့ false9ထက်စာရင် တိုက်စစ်သမား စစ်စစ်နေရာကို တိုးမြင့်ကစားနေရတယ်။ ဒီတော့ လီဗာပူးရဲ့ ဖန်တီးမှုအားလုံးက ညာခြမ်းအစွန်သမားကနေ လာပါတယ်။ ကလပ်အသင်းတစ်သင်းက ညာအစွန်လူကို အသက်သွေကြေးအဖြစ် အသုံးပြုတာမျိုး မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှ မရှိပါဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း စဉ်းစားလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ထရန့်ဟာ မနှစ်တုန်းက ဂိုးထောက်ပံ့မှု ၁၂ ကြိမ် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးကွင်းလယ်လူ အားလုံးပေါင်းထက် ၃ ကြိမ် ပိုများခဲ့တယ်။ ဖာမင်နိုရဲ့ ၂ ဆဖြစ်ပြီး ဆာလက်ထက် ၅၀% ပိုများပါတယ်။ ဘယ်အစွန်က ရော်ဘတ်ဆန်ထက်တောင် တစ်ကြိမ် ပိုများခဲ့သေးတယ်။ မနှစ်က လီဗာပူးက ဝတ်ဖိုဒ့်ကို ၅-၀ နဲ့ အနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာ သွင်းဂိုးအားလုံးက ထရန့်နဲ့ ရော်ဘတ်ဆန်တို့ရဲ့ ဂိုးထောက်ပံ့ပေးမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရော်ဘတ်ဆန်က မော်ဒန်အစွန်လူပုံစံမျိုးပါ။ တိုက်စစ်ကိုလိုက်တယ်၊ သူက ဖြတ်တင်ဘောရှင်ဖြစ်တယ်။ ထရန့်ကတော့ မတူပါဘူး။ သူက ပါရမီရှင် ဖန်တီးရှင်ပါ။ သူက ဖြတ်တင်ဘောတွေ ပေးတာတော့ ဟုတ်တယ် ဒါပေမယ့် ခံစစ်ကနေ ကွင်းလယ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး တိုက်စစ်ကို တိုက်ရိုက်ပေးတဲ့ lofted through-balls နဲ့ တိုက်စစ်သမားကို အမြန်ပေးတဲ့ fires quick passes ပေးမှုတွေကို လုပ်နိုင်သူဖြစ်တယ်။ သူက တောင်ပံကနေ ဧရိယာထဲကို ချိုးချဝင်ရောက်ပြီး ဘယ်ခြေနဲ့လည်း ခြိမ်းခြောက်မှု လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်ကို ရင်ဆိုင်ကစားတဲ့ပွဲမှာ ပွဲအပြီး အမ်မရီက သူတို့နဲ့ လီဗာပူးက သိပ်မကွာတော့ဘူးလို့ ပြောတာကို နည်းစနစ်အသားပေးတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက လှောင်ရယ်ကြပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့အမြင်မှာ အာဆင်နယ်က လီဗာပူးကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုမှုတွေမှာ အာဆင်နယ်ရဲ့ ကစားကွက်က လီဗာပူးအတွက် ပျော်စရာတောင် ကောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဧရိယာထဲမှာ အသင်းသား ၈ ဦးလောက်က ဝင်ရောက်ဖို့ အသင့်ပြင်နေတဲ့ အနေအထားမှာ ဟန်ဒါဆန်က ဘယ်အစွန်ဒေါင့်ကို ဘောလုံးပေးခဲ့တယ်။ အင်္ဂလန်သားရဲ့ ပေးမှုက လူမရှိတဲ့နေရာလို ထင်စရာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ရော်ဘတ်ဆန်က အဲ့သည်နေရာကို တိုက်စစ်လိုက်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုသိခဲ့ပြီးသားပါ။ အာဆင်နယ်အသင်းသားတွေ ဘာလုပ်နေသလဲ? ဖြတ်တင်ဘောကို ခုခံဖို့ ဧရိယာထဲ စုပြုံဝင်နေပါတယ်။
လီဗာပူးအစွန်လူနှစ်ဦးဟာ ဘရာဇီးဂန္တဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ကာဖူးနဲ့ ရော်ဘတ်တို ကားလိုစ့်တို့ လုပ်ပြခဲ့တဲ့ အစွန်နှစ်ဘက် ဘောလုံးချိန်းကစားမှုကို မကြာခဏ လုပ်လေ့ရှိတယ်။ မနှစ်က မန်စီးတီးကို အဝေးကွင်းမှာ အရေးနိမ့်ခဲ့တုန်းက ဖာမင်နိုရဲ့ ခေါင်းတိုက် ခြေပဂိုးမှာ အစွန်လူနှစ်ဦးက ဘယ်ကနေညာ ညာကနေဘယ်ကို ဘောလုံးပေးမှုတွေ လုပ်နေချိန်မှာ မန်စီးတီးရဲ့ ဖိအားပေးမှုက ဘာတစ်ခုမှ မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါက လီဗာပူးရဲ့ အထူးကျွမ်းကျင်မှုပါ။
အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲ ပထမပိုင်း မပြီးခင်မှာ မာတစ် ခေါင်းတိုက်သွင်းဖို့ ထရန့်က ထောင့်ကန်ဘော ပေးခဲ့ပါတယ်။ တိုက်စစ်ကို open play ကစားချိန်မှာလုပ်တဲ့ ဖြတ်တင်ဘောကနေ မဟုတ်ပဲ တည်ကန်ဘောကနေ ဂိုးရခဲ့တာကလွဲလို့ ထရန့် ဒါမျိုးပေးရင် ဧရိယာထဲမှာရှိနေတဲ့ အဆုံးသတ်သူတွေက ဒီလိုအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာ ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လို့ ဒီလိုလွယ်ကူပါတယ်ဆိုတဲ့ နည်းစနစ်ကို ပရီးမီးယားလိဂ်က ဘယ်လို ညာအစွန်လူက လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လို လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါလဲ။
အာဆင်နယ်ရဲ့ စနစ်က အမှားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အားနည်းချက်တွေ များနေခဲ့တယ်။ ထင်ရှားအောင် ဒုတိယဂိုးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် မာနေးက ဘယ်တောင်ပံကနေ ဘောလုံးရလာတော့ ညာခြမ်းက တိုက်စစ်လိုက်ဖို့ပြင်နေတဲ့ ထရန့်ကို ထိုးပေးခဲ့တယ်။ အာဆင်နယ်က ခံစစ်ကို ကျဉ်းမြောင်းပြီး ဧရိယာထဲမှာ လူများများထည့်တဲ့ ဗျူဟာကိုပဲ သုံးခဲ့တယ်။ တောင်ပံတွေမှာ အစွန်သမားတွေ စိတ်ကြိုက်ကစားခွင့်ကို မျက်ကွယ်ပြုထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ဘောလုံးကိုရလာတဲ့နောက်မှာ ထရန့်ဟာ ပြိုင်ဘက်အသင်းသားတွေ များစွာကြားကနေ ဧရိယာထဲက ဖာမင်နိုရဲ့ ခြေထောက်ထဲကို ဘောလုံးထိုးပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဘရာဇီးသားက ပုံမှန်လုပ်နေကျ ထိန်သိမ်းမှုနဲ့ ဆာလက်ကို ထိုးပေးရာမှာ လူးဝစ်က ဆွဲထားတာကြောင့် ပင်နယ်တီ ရခဲ့တယ်။ ဒါက ၂-၀ ပါ။ တိုက်စစ်ရဲ့လားရာဟာ ညာခြမ်းက လူငယ်လေးရဲ့ ပါးနပ်တဲ့ ဖန်တီးမှုကနေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ်ဟာ ခံစစ်ကနေ ဘောလုံးထုတ်ဖို့ ကြိုးစားစဉ်မှာ ထရန့်ရဲ့ နေရာယူမှုကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ သူက ဆာလက်၊ ဖာမင်နို၊ မာနေးတို့နဲ့ တစ်တန်းတည်း နေရာယူပြီး တိုက်စစ်သမား လေးဦးဖြစ်စေခဲ့တယ်။ အဲ့သည်အချိန်မှာ ဟန်ဒိုက သူနဲ့ ကိုက် ၃၀ အကွာမှာနေပြီး ညာအစွန်ကို ကာဗာပေးထားပါတယ်။ အာဆင်နယ်ရဲ့ narrow diamond ကစားကွက်က ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ရှင်းပါတယ်။ ထရန့်က လိုက်ပိတ်စရာ တောင်ပံသမား မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ သူ့အနေနဲ့ တိုက်စစ်ကို အေးဆေးလိုက်နိုင်တယ်။ မဟုတ်လည်း ဟန်ဒိုက သူ့နေရာကနေ ဖြည့်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
ပထမပိုင်းတုန်းကလည်း ထရန့်ရဲ့ တိုက်ခိုက်လိုစိတ်အပြည့်နဲ့ ဖိအားပေးမှုက ဆီဘယ်လော့ကို ဖိအားတွေ များစေပြီး ဘောလုံးကို အမှားမှား ပေးခဲ့တာကြောင့် မာနေးက ဧရိယာထဲ အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ဘက်က ဖိအားပေးချိန်တွေမှာတော့ အစွန်သမားတွေက ကွင်းလယ်လူနဲ့ တွဲဘက်မှုက တည်ငြိမ်ပါတယ်။ လီဗာပူးကွင်းလယ်တွေက ဖန်တီးရှင်တွေမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖန်တီးရှင်တွေအတွက် ကာဗာပေးဖို့ကတော့ ပါးနပ်သူတွေဖြစ်တယ်။
ထရန့်ဟာ မနှစ်ကတည်းက သူ့ရဲ့အရည်အချင်းကို ပြသခဲ့ပြီး ဖန်တီးရှင်တစ်ဦးအဖြစ် အမြင်ရှိမှုက သူ့ကို ကွင်းလယ်လူအဖြစ် ထားကစားဖို့တောင် မှတ်ချက်ပေးခံခဲ့ရတာပါ။ လီဗာပူးရဲ့ အသက်သွေးကြောလို့ဆိုရမယ့် ညာအစွန်လူဟာ ပြည့်စုံတဲ့ ခံစစ်ကာကွယ်မှုတွေ လုပ်နိုင်ဖို့တော့ ဝေးကွာလှပါတယ်။ မနှစ်က ချန်ပီယံလိဂ်မှာ နာပိုလီကို ရင်ဆိုင်တုန်းက သူဟာ ခံစစ်ပိုင်း အမှားတွေ များခဲ့တယ်။ ဆောက်သမ်တန် ကားဒစ်ပွဲတွေမှာလည်း အမှားတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီရာသီ နော်ဝစ်နဲ့ပွဲမှာလည်း ခံစစ်အမှားတွေ ရှိခဲ့တာပါပဲ။
အသက် ၂၀ အရွယ် အစွန်လူဟာ ကွင်းလယ်လူကို ကာဗာလုပ်ပေးရတဲ့ အစွန်လူတစ်ယောက်အဖြစ် ခံစစ်ကို ကာကွယ်မှုမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေသူပါ။ သူ့ထက်စာရင် ခံစစ်ကို ကာကွယ်ဖို့ကတော့ ဂိုးမက်စ်က ပိုမိုထူးချွန်တဲ့ ညာအစွန်လူ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ထရန့်ဟာ လီဗာပူးတိုက်စစ်တစ်ခုလုံးကို အခရာလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ထိ အမြင်ရှိသူဖြစ်တယ်။ ထရန့်ဟာ အင်္ဂလန်သားတွေထဲမှာ မြင်ရလေ့ရှိတဲ့ ပုံမှန်ညာအစွန်လူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သူက ပါရမီရှင် ဖန်တီးရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
[Unicode] အီတလီတိုကျစဈမှူးဟောငျးကွီး Gianluca Vialli က စကားတခှနျးပွောခဲ့တာရှိတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ အစှနျလူဆိုတာက အသငျးတဈသငျးမှာ အညံ့ဆုံးပဲ။ သူက တိုကျစဈပိုကောငျးရငျ တောငျပံသမားလို ကစားနိုငျပွီး ခံစဈပိုကောငျးရငျတော့ ဗဟိုခံစဈသမားလိုလညျး ကစားနိုငျတယျလို့ဖွဈတယျ။
တူညီတဲ့ သီအိုရီတဈခုကို လီဗာပူးဗဟိုခံစဈသမား ကာရဂေါကလညျး ပွောခဲ့ပါတယျ။ ဘယျကစားသမားကမှ အစှနျလူအဖွဈနဲ့ ကစားပွီး တိုးတကျလာဖို့ ဆန်ဒမရှိပါဘူးတဲ့။ ဒီစကားက ဂယျရီနဗီးကို တိုကျရိုကျ ဖဲ့ခဲ့တာက ၅၀% ဖွဈနိုငျပါတယျ။
မျောရငျညိုကလညျး သူကွိုကျရတဲ့ ညာအစှနျလူ Paulo Ferreira နဲ့ ပကျသကျပွီး ဒီလိုပွောဖူးတယျ။ ” သူက ပှဲမှာ ဘယျတော့မှ အကောငျးဆုံးကစားသမား မဟုတျဘူး။ ဒါပမေယျ့ အမှတျ ၁၀ ပေးရငျ အမွဲတမျး ၇ လောကျရတတျတဲ့သူပဲ ” လို့ ဖွဈတယျ။
ကမ်ဘာဘောလုံးလောကကွီးက အပွောငျးအလဲ ဖွဈသှားခဲ့ပါပွီ။ အစှနျသမားတှရေဲ့ ကစားဟနျနဲ့ပကျသကျလို့ တျောလှနျပွောငျးလဲမှုတဈခုကလညျး စတငျခဲ့တာ ဆယျဆုနှဈ ကွာခဲ့ပွီဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့လို့ အစှနျသမားနဲ့ ပကျသကျလို့ အခကျြသုံးခကျြနဲ့ အကဲဖွတျနကွေဆဲပါပဲ။
၁) သူ့ရဲ့နရောကို ဘယျလောကျကောငျးကောငျး ကစားနိုငျသလဲနဲ့ ရငျဆိုငျရတဲ့ ပွိုငျဘကျ တောငျပံသမားထကျ ပိုကောငျးသလား
၂) တိုကျစဈလိုကျမှုတှမှော ဖွတျတငျဘောကို ဘယျလောကျထိ ထိရောကျစှာ ပံ့ပိုးပေးနိုငျသလဲ
၃) ဒီအလုပျနှဈခုအတှကျ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ဘယျလောကျထိ အားသနျသလဲ၊ ကှငျးအတှငျးမှာ အတကျအဆငျးကို တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ ပွငျးထနျစှာ လုပျနိုငျသလား
အစှနျသမားတှကေ ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှုတှမှောနဲ့ ဖနျတီးမှုတှမှော ပါဝငျပေးနိုငျမှုနဲ့ ပကျသကျပွီး တှကျခကျြခံရမှုတှလေညျး ရှိပါတယျ။ အခွားသော နရောတှကေတော့ ပိုပွီးလေးစားခံရမှုတှေ ရှိလာခဲ့ပါပွီ။ ဂိုးသမားတဈဦးကို sweeper-keeper အဖွဈ အသုံးပွုမှုကနေ တိုကျစဈသမားကို false9အဖွဈ အသုံးပွုတဲ့ ပွောငျးလဲခွငျးတှလေိုပေါ့။ အားလုံးက နရောတှကေို ပရျောဖကျရှငျနယျကကြ သုံးသပျမှုနဲ့ လေးစားမှုတှေ ပေးလာကွပွီဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အစှနျသမားတဈယောကျနဲ့ ပကျသကျလာရငျတော့ ပှဲအပျေါမှာ အမွငျဘယျလောကျရှိလဲ? ဘောလုံးကို သကျသောငျ့သကျသာ ကစားနိုငျလား? ပေးမှုကောငျးတှေ လုပျနိုငျလား? ဒီလို ဆယျဆုနှဈကွာ ကိုငျစှဲထားတဲ့ အမွငျတှကေ အမြားကွီး မတိုးတကျလာသေးပါဘူး။ ဒနျနီအဲဗကျဈနဲ့ ဖီလဈလမျးတို့ဟာ လုပျအားနှုနျးနဲ့ ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှုတှမှော ကစားနိုငျစှမျးတှအေတှကျ အထူး အသိအမှတျပွုခံရတယျ။ သူတို့က ကှငျးလယျလူတဈယောကျလိုတောငျ ဘောလုံးကစားနိုငျပါတယျ။ နှဈဦးကလညျး ကှငျးလယျသမားတှနေဲ့ တှဲဘကျပွီး ဖနျတီးရှငျတှလေိုတောငျ ကစားခဲ့ကွတာဖွဈတယျ။
အင်ျဂလနျပွငျလိဂျမှာ အစှနျလူတှကေို အသုံးခမြှုနဲ့ အထငျကွီးမှုတှေ မြားစှာ ရှိလာနပေမေယျ့ ထရနျ့ အလကျဇန်ဒါး အာနိုးနဲ့ ပကျသကျလာရငျတော့ လေးစားခံရမှုက ထိုကျသငျ့သလောကျ မရသေးပါဘူး။ လီဗာပူးဟာ ဖနျတီးရှငျမရှိတဲ့ အသငျးတဈသငျးပါ။ ကျောတငျညိုကို လကျလှတျရတဲ့နောကျ ယာဂငျကလော့ပျဟာ ဖနျတီးရှငျဆိုတဲ့ ကစားသမားမြိုးကို ထပျမလိုခငျြတော့ပါဘူး။ ဖာဘငျညိုဟာ တကယျတမျးတော့ တညျငွိမျတဲ့ holding player တဈဦးပဲဖွဈတယျ။ ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှုမှာ သငျ့တျောကောငျးမှနျပမေယျ့လို့ သူက ပီယာလိုကဲ့သို့ ကစားသမား မဟုတျပါဘူး။
ဟနျဒို၊ ဂီနီ၊ မီလျနာတို့ကတော့ လုပျအားကို အားပွုတဲ့ ကှငျးလယျလူတှပေါ။ ကိတျတာကတော့ အခွမေကသြေးဘူး။ လယျလာနာနဲ့ ရှာကှီရီကလညျး ပုံမှနျနရောမရဘူး။ ဖာမငျနိုကတော့ false9ထကျစာရငျ တိုကျစဈသမား စဈစဈနရောကို တိုးမွငျ့ကစားနရေတယျ။ ဒီတော့ လီဗာပူးရဲ့ ဖနျတီးမှုအားလုံးက ညာခွမျးအစှနျသမားကနေ လာပါတယျ။ ကလပျအသငျးတဈသငျးက ညာအစှနျလူကို အသကျသှကွေေးအဖွဈ အသုံးပွုတာမြိုး မျောဒနျဘောလုံးလောကမှ မရှိပါဘူး။ ဘယျသူမှလညျး စဉျးစားလို့ရမှာ မဟုတျဘူး။
ထရနျ့ဟာ မနှဈတုနျးက ဂိုးထောကျပံ့မှု ၁၂ ကွိမျ လုပျခဲ့ပါတယျ။ လီဗာပူးကှငျးလယျလူ အားလုံးပေါငျးထကျ ၃ ကွိမျ ပိုမြားခဲ့တယျ။ ဖာမငျနိုရဲ့ ၂ ဆဖွဈပွီး ဆာလကျထကျ ၅၀% ပိုမြားပါတယျ။ ဘယျအစှနျက ရျောဘတျဆနျထကျတောငျ တဈကွိမျ ပိုမြားခဲ့သေးတယျ။ မနှဈက လီဗာပူးက ဝတျဖိုဒျ့ကို ၅-၀ နဲ့ အနိုငျရတဲ့ပှဲမှာ သှငျးဂိုးအားလုံးက ထရနျ့နဲ့ ရျောဘတျဆနျတို့ရဲ့ ဂိုးထောကျပံ့ပေးမှုတှေ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ရျောဘတျဆနျက မျောဒနျအစှနျလူပုံစံမြိုးပါ။ တိုကျစဈကိုလိုကျတယျ၊ သူက ဖွတျတငျဘောရှငျဖွဈတယျ။ ထရနျ့ကတော့ မတူပါဘူး။ သူက ပါရမီရှငျ ဖနျတီးရှငျပါ။ သူက ဖွတျတငျဘောတှေ ပေးတာတော့ ဟုတျတယျ ဒါပမေယျ့ ခံစဈကနေ ကှငျးလယျနဲ့ ခြိတျဆကျပွီး တိုကျစဈကို တိုကျရိုကျပေးတဲ့ lofted through-balls နဲ့ တိုကျစဈသမားကို အမွနျပေးတဲ့ fires quick passes ပေးမှုတှကေို လုပျနိုငျသူဖွဈတယျ။ သူက တောငျပံကနေ ဧရိယာထဲကို ခြိုးခဝြငျရောကျပွီး ဘယျခွနေဲ့လညျး ခွိမျးခွောကျမှု လုပျနိုငျပါတယျ။
အာဆငျနယျကို ရငျဆိုငျကစားတဲ့ပှဲမှာ ပှဲအပွီး အမျမရီက သူတို့နဲ့ လီဗာပူးက သိပျမကှာတော့ဘူးလို့ ပွောတာကို နညျးစနဈအသားပေးတဲ့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ လှောငျရယျကွပါတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ သူတို့အမွငျမှာ အာဆငျနယျက လီဗာပူးကို ခွိမျးခွောကျနိုငျခွငျး မရှိပါဘူး။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောဆိုမှုတှမှော အာဆငျနယျရဲ့ ကစားကှကျက လီဗာပူးအတှကျ ပြျောစရာတောငျ ကောငျးခဲ့ပါတယျ။
ဧရိယာထဲမှာ အသငျးသား ၈ ဦးလောကျက ဝငျရောကျဖို့ အသငျ့ပွငျနတေဲ့ အနအေထားမှာ ဟနျဒါဆနျက ဘယျအစှနျဒေါငျ့ကို ဘောလုံးပေးခဲ့တယျ။ အင်ျဂလနျသားရဲ့ ပေးမှုက လူမရှိတဲ့နရောလို ထငျစရာဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ရျောဘတျဆနျက အဲ့သညျနရောကို တိုကျစဈလိုကျလာမယျဆိုတာ ကွိုသိခဲ့ပွီးသားပါ။ အာဆငျနယျအသငျးသားတှေ ဘာလုပျနသေလဲ? ဖွတျတငျဘောကို ခုခံဖို့ ဧရိယာထဲ စုပွုံဝငျနပေါတယျ။
လီဗာပူးအစှနျလူနှဈဦးဟာ ဘရာဇီးဂန်တဝငျတှဖွေဈတဲ့ ကာဖူးနဲ့ ရျောဘတျတို ကားလိုဈ့တို့ လုပျပွခဲ့တဲ့ အစှနျနှဈဘကျ ဘောလုံးခြိနျးကစားမှုကို မကွာခဏ လုပျလရှေိ့တယျ။ မနှဈက မနျစီးတီးကို အဝေးကှငျးမှာ အရေးနိမျ့ခဲ့တုနျးက ဖာမငျနိုရဲ့ ခေါငျးတိုကျ ခွပေဂိုးမှာ အစှနျလူနှဈဦးက ဘယျကနညော ညာကနဘေယျကို ဘောလုံးပေးမှုတှေ လုပျနခြေိနျမှာ မနျစီးတီးရဲ့ ဖိအားပေးမှုက ဘာတဈခုမှ မတားဆီးနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဒါက လီဗာပူးရဲ့ အထူးကြှမျးကငျြမှုပါ။
အာဆငျနယျနဲ့ပှဲ ပထမပိုငျး မပွီးခငျမှာ မာတဈ ခေါငျးတိုကျသှငျးဖို့ ထရနျ့က ထောငျ့ကနျဘော ပေးခဲ့ပါတယျ။ တိုကျစဈကို open play ကစားခြိနျမှာလုပျတဲ့ ဖွတျတငျဘောကနေ မဟုတျပဲ တညျကနျဘောကနေ ဂိုးရခဲ့တာကလှဲလို့ ထရနျ့ ဒါမြိုးပေးရငျ ဧရိယာထဲမှာရှိနတေဲ့ အဆုံးသတျသူတှကေ ဒီလိုအဆုံးသတျတယျဆိုတာ ထူးဆနျးတဲ့ကိစ်စ မဟုတျတော့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လို့ ဒီလိုလှယျကူပါတယျဆိုတဲ့ နညျးစနဈကို ပရီးမီးယားလိဂျက ဘယျလို ညာအစှနျလူက လုပျရိုးလုပျစဉျလို လုပျနိုငျစှမျးရှိပါလဲ။
အာဆငျနယျရဲ့ စနဈက အမှားတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အားနညျးခကျြတှေ မြားနခေဲ့တယျ။ ထငျရှားအောငျ ဒုတိယဂိုးကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ မာနေးက ဘယျတောငျပံကနေ ဘောလုံးရလာတော့ ညာခွမျးက တိုကျစဈလိုကျဖို့ပွငျနတေဲ့ ထရနျ့ကို ထိုးပေးခဲ့တယျ။ အာဆငျနယျက ခံစဈကို ကဉျြးမွောငျးပွီး ဧရိယာထဲမှာ လူမြားမြားထညျ့တဲ့ ဗြူဟာကိုပဲ သုံးခဲ့တယျ။ တောငျပံတှမှော အစှနျသမားတှေ စိတျကွိုကျကစားခှငျ့ကို မကျြကှယျပွုထားခဲ့တာဖွဈတယျ။
ဘောလုံးကိုရလာတဲ့နောကျမှာ ထရနျ့ဟာ ပွိုငျဘကျအသငျးသားတှေ မြားစှာကွားကနေ ဧရိယာထဲက ဖာမငျနိုရဲ့ ခွထေောကျထဲကို ဘောလုံးထိုးပေးနိုငျခဲ့တယျ။ ဘရာဇီးသားက ပုံမှနျလုပျနကြေ ထိနျသိမျးမှုနဲ့ ဆာလကျကို ထိုးပေးရာမှာ လူးဝဈက ဆှဲထားတာကွောငျ့ ပငျနယျတီ ရခဲ့တယျ။ ဒါက ၂-၀ ပါ။ တိုကျစဈရဲ့လားရာဟာ ညာခွမျးက လူငယျလေးရဲ့ ပါးနပျတဲ့ ဖနျတီးမှုကနေ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
အာဆငျနယျဟာ ခံစဈကနေ ဘောလုံးထုတျဖို့ ကွိုးစားစဉျမှာ ထရနျ့ရဲ့ နရောယူမှုကလညျး စိတျဝငျစားစရာပါ။ သူက ဆာလကျ၊ ဖာမငျနို၊ မာနေးတို့နဲ့ တဈတနျးတညျး နရောယူပွီး တိုကျစဈသမား လေးဦးဖွဈစခေဲ့တယျ။ အဲ့သညျအခြိနျမှာ ဟနျဒိုက သူနဲ့ ကိုကျ ၃၀ အကှာမှာနပွေီး ညာအစှနျကို ကာဗာပေးထားပါတယျ။ အာဆငျနယျရဲ့ narrow diamond ကစားကှကျက ရယျစရာဖွဈခဲ့တယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ ရှငျးပါတယျ။ ထရနျ့က လိုကျပိတျစရာ တောငျပံသမား မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ သူ့အနနေဲ့ တိုကျစဈကို အေးဆေးလိုကျနိုငျတယျ။ မဟုတျလညျး ဟနျဒိုက သူ့နရောကနေ ဖွညျ့ပေးသှားပါလိမျ့မယျ။
ပထမပိုငျးတုနျးကလညျး ထရနျ့ရဲ့ တိုကျခိုကျလိုစိတျအပွညျ့နဲ့ ဖိအားပေးမှုက ဆီဘယျလော့ကို ဖိအားတှေ မြားစပွေီး ဘောလုံးကို အမှားမှား ပေးခဲ့တာကွောငျ့ မာနေးက ဧရိယာထဲ အခှငျ့အရေးရခဲ့ပါတယျ။ အာဆငျနယျဘကျက ဖိအားပေးခြိနျတှမှောတော့ အစှနျသမားတှကေ ကှငျးလယျလူနဲ့ တှဲဘကျမှုက တညျငွိမျပါတယျ။ လီဗာပူးကှငျးလယျတှကေ ဖနျတီးရှငျတှမေဟုတျဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဖနျတီးရှငျတှအေတှကျ ကာဗာပေးဖို့ကတော့ ပါးနပျသူတှဖွေဈတယျ။
ထရနျ့ဟာ မနှဈကတညျးက သူ့ရဲ့အရညျအခငျြးကို ပွသခဲ့ပွီး ဖနျတီးရှငျတဈဦးအဖွဈ အမွငျရှိမှုက သူ့ကို ကှငျးလယျလူအဖွဈ ထားကစားဖို့တောငျ မှတျခကျြပေးခံခဲ့ရတာပါ။ လီဗာပူးရဲ့ အသကျသှေးကွောလို့ဆိုရမယျ့ ညာအစှနျလူဟာ ပွညျ့စုံတဲ့ ခံစဈကာကှယျမှုတှေ လုပျနိုငျဖို့တော့ ဝေးကှာလှပါတယျ။ မနှဈက ခနျြပီယံလိဂျမှာ နာပိုလီကို ရငျဆိုငျတုနျးက သူဟာ ခံစဈပိုငျး အမှားတှေ မြားခဲ့တယျ။ ဆောကျသမျတနျ ကားဒဈပှဲတှမှောလညျး အမှားတှလေုပျခဲ့တယျ။ ဒီရာသီ နျောဝဈနဲ့ပှဲမှာလညျး ခံစဈအမှားတှေ ရှိခဲ့တာပါပဲ။
အသကျ ၂၀ အရှယျ အစှနျလူဟာ ကှငျးလယျလူကို ကာဗာလုပျပေးရတဲ့ အစှနျလူတဈယောကျအဖွဈ ခံစဈကို ကာကှယျမှုမှာ အားနညျးခကျြတှေ ရှိနသေူပါ။ သူ့ထကျစာရငျ ခံစဈကို ကာကှယျဖို့ကတော့ ဂိုးမကျဈက ပိုမိုထူးခြှနျတဲ့ ညာအစှနျလူ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ထရနျ့ဟာ လီဗာပူးတိုကျစဈတဈခုလုံးကို အခရာလို့ ဆိုနိုငျတဲ့ထိ အမွငျရှိသူဖွဈတယျ။ ထရနျ့ဟာ အင်ျဂလနျသားတှထေဲမှာ မွငျရလရှေိ့တဲ့ ပုံမှနျညာအစှနျလူမြိုး မဟုတျပါဘူး။ သူက ပါရမီရှငျ ဖနျတီးရှငျတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။
VAR ရဲ့ ပင်နယ်တီ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက လက်ခံဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ ဟယ်ရီကိန်း
Youth Ranks: ရာသီစမှာတင် တန်ကြေး အလွန်အမင် ခုန်တက်လာတဲ့ ကြယ်ပွင့် ၁၀ ဦး